कोभ्याक्स मात्र कुरेका छैनाैं,भारत र चीनसँग पटकपटक कुरा भएको छ
सरकार कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने काेराेना विरूघ्दकाे खोपको मात्रै भरमा नपरेको बताइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको खोप महाशाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले नेपालमा भण्डारण गर्न सक्ने प्रकृतिको खोप भारत, चीनमा उत्पादन भैसकेको र त्यसले चौथो चरण समेत पार गरेकाले सरकारले सकेसम्म छिटो नेपालमा खोप भित्राउने तयारीमा लागेको डा.शर्माले बताउनुभयो ।
खोपमा अनुदानको मात्र भर पर्दा ढिलो हुनसक्छ किन्ने तयारी जरुरी
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा सहजै आयात कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी गरेको छ भने अर्थमन्त्रालयले वित्तिय प्रबन्ध मिलाउन थालेको छ । सरकारी संयन्त्रले आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी थालेपनि समयमै भ्याक्सिन पाउन धेरै प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक रहेको डा.प्रकाश घिमिरे बताउनुहुन्छ । कोरोना भाइरस बिरुद्धको खोपको चर्चा विश्व बजारमै चुलिएको छ । नेपालमा पनि कोरोना बिरुद्धको खोपको बारेमा निक्कै चर्चा परिचर्चा भैरहेको छ । विश्वमा १० वटा कम्पनीले तेस्रो चरणमा खोपको सफल परीक्षण गरेका छन् । केही देशले भने खोप लगाउन सुरुनै गरिसकेका छन् । तर कोभ्याम्सले भने कुनै पनि कम्पनीलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म अन्तिम अनुमति दिएको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य स्थायी बाँध बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले बाँधको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । गेटहरुको काम यही माघ महिना सम्ममा सिध्याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाले बताएको छ । उक्त क्षेत्रका काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिदैँ उहाँले चाँडै सिधिने बताउनुभयो । केही समय अगाडि नै अस्थायी बाँध बनि सकेको र अर्को स्थायी बाँध बनाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । बाँध निर्माणको काम अन्तिम चरण पुगेको बताउदै उहाँले सुरुङमा रहेको त्रुटि सच्याउने काम पनि सकिन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
कानुनी बाटाे खुल्याे, भण्डारण समस्या, क्षमता थप्ने तयारी
कोरोना भाइरसको खोप बनेको समाचार दैनिक रुपमा आइरहेका छन् । खोप बनेसँगै त्यसको अन्तिम परीक्षण गर्ने र त्यसलाई कसरी विश्वका सबै देशमा पु¥याउन सकिन्छ भनेर कोभ्याक्स टिम (विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ र विश्व बैंक) तयारी थालेको छ । अहिले नेपालमा माइनस १८ डिग्रीसम्म खोपको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता छ । अहिले भएको क्षमतामा केही थप गरेमा डब्ल्युएचओले उपलब्ध गराउने तीन प्रतिशत खोप भण्डारण गर्न सक्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताउनुभयो । अहिले हामीसँग भएको भण्डारणमा केही थप गरेमा तीन प्रतिशतमा पुग्ने भण्डारण गर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालमा विगतदेखिनै भण्डारण गदैै आएको र २ डिग्रीदेखि ८ डिग्रीसम्मको आठ लाख डोज भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग रहेको डा. शर्माले भन्नुभयो ।
विश्वका विकसित, अल्पविकसित तथा अविकसित देशहरु यति बेला कोभिड–१९ को भ्याक्सिन (खोप) बनाउने अभियानमा छन् । खोपको अनुसन्धान तेस्रो चरण पूरा गरी अन्तिम तथा चौथो चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यसै क्रममा विश्वका केही देशले नेपालमा पनि तेस्रो चरणको परीक्षण गर्ने र खोप उत्पादनमा नेपाललाई सघाउने पनि बताउँदै आएका छन् । खोप विकासको काममा सफलता हात पारी त्यसको सिड नेपालमा ल्याएर खोप बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? भनेर बहससमेत सुरु भइसकेको छ । केन्द्रीय रेबिज भ्याक्सिन प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरले रेबिजको भ्याक्सिन बनाएर नेपालमै सफल प्रयोग गरेको थियो । त्यो समयको नेतृत्व डा. सुर्दशन गौतमले गर्नुभएको थियो । नेपालमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता भएमा नेपालमा कोरोनाको खोप बनाउन सकिन्छ ? भनेर उहाँसँग प्रश्न सोध्दा उहाँले तत्कालै नेपालमा कोरानाको भ्याक्सिन बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । भ्याक्सिन एकै पटक तयार पार्न नसकिने भएकाले त्यसमा प्रयोग हुने सिडको उपलब्धता र त्यसको लागि लामो अध्ययन आवश्यक रहेको डा. गौतमले बताउनुभयो ।